इन्डिया दुष्ट मात्रै होइन कमिना पनी हो ? – Pundary Aryal :: Nepali Literature Portal
इन्डिया दुष्ट मात्रै होइन कमिना पनी हो ?
May 11, 2020 Article
भारत कैले पनी भारत हैन, न हिजो थियो न आज छ । उनिहरु त इन्डियन हुन । तत्कालिन Oxford Dictionary – 1900 century – Page no. 789, मा “India” word means “Poor-Old fashioned – Criminal people”. भनेर लेखिएको थियो । तीनको हैसियत ऐले पनी यस्तै छ । कहिले मुगल साम्राज्य भयो त्यहा, यी मुसलमानका दाश भएर बाचे । कहिले अंग्रेजको कोलोनी भयो, कहिले अंग्रेजको गुलामी गरेर बाचे । भारत त हिन्दुस्तान पनि कैले हुन सकेन र रहेन पनी । अंग्रेजले छोडेर जादा इश्लामले आफ्नो हिस्सा लिएर पाकिस्तान बनाए । तर हिन्दुले हिन्दुस्तान बनाउन सकेनन । साच्चै यिनीहरु असाध्यै कायर छन, कमिना छन । दुष्ट पनी छन । यिनको हजुरी गर्ने हो भने टाउको टेक्छन । अलिकता हिम्मत देखाउन सक्नु भयो भने यिनीहरु तुरुन्त तपाइको खुट्टा समात्न पनी पछि पर्दैनन । इन्डियन साच्चै नै कमिना छन । त्यहाँका आफुलाई जती ठुला र इज्जतदार मान्छे हुँ भन्छन । ती झन कमिना छन । बेइमान छन । भारत र भारती भन्नै मिल्दैन यिनीहरुलाई, यी त ब्लाडी इन्डियन हुन । यीनीहरुले इंडिया भन्ने शब्द नराम्रो भएको र हिन्दुराज्य कायम गर्न नसकेकोले हिन्दुस्तान पनी उपयुक्त नभएपछि राजा दुश्यन्त र शकुन्तलाबाट जन्मेको भरत राजा भएको इतिहाससंग जोडेर भारत नाम राखी आफु भारती भएको बनाएका हुन । जबकी भारतले शासन गरेको अन्त्यन्त सानो राज्य हस्तिनापुर् थियो । तर पनी संसारले इन्डिया नै भन्दछन । इन्डियाका नेता र RAW दुष्ट मात्रै होइनन कमिना पनी छन् ।
साच्चै भन्ने हो भने नेपाल देब भूमि हो । यहीबाट बैदिक साँस्कृतको बिकाश भएको थियो । यो प्राचिन ऋषिमुनीको तपस्या भूमि पनी हो । यो देशले पुर्बिय दर्शनको बिकाश गरेको हो । अन्त्यसम्म आततायी मुगल सम्राटबाट समस्त बैदिक समाजलाई बचाएको थियो । इन्डियनहरु लोभी र पापी भएकै कारणले मुगल र अंग्रेजले दाश बनाउन सकेका हुन । अहिलेको इन्डिया सयौ देशका राजाका राज्य मिलेर बनेको हो । एक प्रदेशसंग अर्को प्रदेशको भाषा मिल्दैन । न त रहन सहन नै मिल्दछ । इन्डिया असाध्यै कमजोर धरातलमा बनेको ठुलो राज्य हो ।
नेपाल संसारको एउटा एस्तो देश हो | जुन देशमा संसारका शक्तिशाली हुँ भन्ने मुगल र अंग्रेजले समेत धेरै पटक प्रयन्त गरेर पनी आफ्नो कब्जामा लिन सकेनन । तत्कालिन बहादुर नेपाली बीर गोर्खालीहरुले तिनको सामना गरेर परास्त गरेका हुन । तिनीहरुको दयाले छोडिएको देश नेपाल कदापी होइन । पछिल्ला पुस्ता नेपालका शासकको कमजोरीले गर्दा आफुले जितेका केहि भू भाग सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि मार्फत अंग्रेजलाई छोडेका थिए । झन् पछिका शासकले आफ्नो सामन्ती शासन कायम राखिरहने लोभले आफुले गुमाएको भूभाग अंग्रेज इन्डियाबाट छोडेर जादा फर्काउन खोज्दा पनी नलिएको हो रे ?
इन्डियालाइ अंग्रेजले छोडेर गए पनी मानसिक दाशत्व उनीहरुको दिमागबाट हटेको छैन । कि त उनीहरुले चाकरी गराउछन कि त उनीहरुले चाकरी गर्छन । उन्मुक्त बहादुर मान्छेले न कसैको चाकरी गर्छन न कसैलाई चाकरी गर्न लगाउछन । नेपालका पछिल्ला शासक राणा, राजा र कांग्रेस र अहिलेको कमनिष्टहरुले समेत इन्डियनको चाकरी गरेर सत्तामा टिकिरहन खोजे । अहिलेका ढोगी राष्ट्रबादी कांगेस वा कमनिष्टका नेता नेपाली जनताको काँधमा उभिएर सत्तामा जाने र इन्डियनको चाकरी गरेर सत्तामा टिकेर बसिरहन खोज्ने दलाल हुन । यिनीहरुले देशको सिमा कायम राख्नको लागी न पहिले न अहिले एउटा सिन्को भाचेका छैनन । उल्टो कहिले कोशी कहिले गण्डक कहिले महाकाली गर्दै एक एक गरेर इन्डियालाइ बुझाएका हुन । देशमा खुलेका आधारभूत उद्योग धन्दालाइ बेचेर, बन्द गराएर, नेपाललाई अरु कमजोर बनाएका हुन र लाखौ नेपालीहरुलाई बेरोजगार बनाइ मेन पावर दलाल एजेन्सी खुलाएर नेपाली जनतालाई अपाङ्ग बनाएका हुन ।
राजाको पालामा सैनिक बेचे, कांग्रेस र कम्युनिष्टले मेन पावर बेचे । कुनै सरकारले पनी सेनालाई सिमानामा राख्दैन, किन ? सेनाको काम देशको सुरक्षा गर्ने हैन ? धन्न बिचरा अनपढ किसानले नेपालको सिमालाइ अलिकति भए पनी सुरक्षा गरेका छन । नेपालको जमिनबाट इन्डिया चाइना जोडने बाटो निर्माण गरेर फेरी नेपाली जनतालाइ पिरोलेको छ । सिमामा दुख त यसले सदा दिएकै छ ।
इन्डियाले सुस्ता र कालापानी कब्जा गर्यो र कयौ ठाउमा सिमामा दशगजा सारेको छ । नेपालको जमिनबाट इन्डिया चाइना जोडने बाटो निर्माण गरेर फेरी नेपाली जनतालाइ पिरोलेको छ । सिमामा त दुख यसले सदा दिएकै छ । अहिले सम्मको सरकारले कहिले पनी कडा प्रतिबाद गरेन । इन्डियाले सिमा मिचेको बिरोध गर्दा उल्टै राष्ट्रबादी नेपालि जनतालाइ लाठि चार्ज र गोली ठोकने काम गरेको थियो र अझै गर्दै छ । इन्डियाले नेपाली जनतालाई अफ्ठारो पारेर नेतासंग साँठगाँठ गरेर सिमा हत्याइ रहेको छ । पंचायत फाल्नको लागी कांग्रेसले चन्द्र शेखरलाइ नेपाल ल्याएर भाषण गराउन सक्नेले हाम्रो कालापानीमा किन सैनिक अखाडा गराएको भनेर कहिले सोधेन ? आज नेपाल सुतेको मान्छे भोलि उठ्दा इन्डिया कयौ ठाउमा भएको छ । सुस्ताका जनताले कयौ पटक हामीलाई सुरक्षा देउ, हाम्रो जमिन इन्डियाले हड़प्यो भनेर सरकार संग जानकारी गराए, बिन्ति गरे, जुलुस लिएर गए तर नेपाल सरकारले कानमा तेल हालेर बस्यौ, कहिले सुनेन । राष्ट्रबाद चुनाबी नारा मात्र भएको छ सधै । सारा नेपाली जनता नेपाल भूमिकोलागी आफ्नो ज्यान दिन पनि तयार छन । पार्टीका कार्यकर्ता बेकुप र अन्धभक्त भएर इन्डियन एम्बेसी धर्ना गर्न जान्छन । उनीहरुले त आफ्नो पार्टीको नेतालाई समात्नु पर्थ्यो । शिंह दर्बार घेर्नु पर्थ्यो । नेतालाई कठालो समातेर जबाफ माग्नु पर्थ्यो ! तर बिडम्बना छ । राष्ट्रबादकुरा गर्दै इन्डियामा गएर १२ बूंदे सम्झौता गरेर राजा फाल्ने पार्टीहरु कहीं राष्ट्रबादी हुन्छ ? बिडम्बना छ, कार्यकर्ता पनी लोभीपापी छन । बुझे जस्तो गरे पनी फेरी तिनै दलाल नेताको पछि लाग्न छोददैनन ।
अबको संसार हिजोको जस्तो छैन । अन्तराष्ट्रिय अदालत, राष्ट्रसंघ छ । ठुलो देशले सानोलाइ हेप्न पाउदैन । एक्सन सरकारले लिने हो, प्रतिपक्षले लिन सक्छ । हिम्मत गर्नुस !!!
मैले बुझेको वा मलाइ लागेको केहि भनाइ बुँदागतमा उल्लेख गरेको छु ।
१. सुगौली संधि अंग्रेजसँग गरिएको हो, उसले इन्डिया छोडेर जादा सुगौलि संधिमा गुमेको भुमि स्वत : नेपालको हुन्छ । यो कुरालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुस, यो भूमि माग्नुस, इन्डियाले सुगौली सन्धी पछी कब्जा गरेको भूमि फिर्ता गर्न तुरुन्त मन्जुर गर्ने छ । कालापानीबाट पनि सैनिक पनी फिर्ता लैजान्छ । दरो गरेर घुडा नटेकी सामना गर्यो भने सम्भव छ ।
२. इन्डिया संसार कै सबभन्दा खराब संधियार घोषणा गर्नुस । पाकिस्तान, बंगालदेशसंग र श्रीलंकासंग बिशेष गठजोर मिलानुस ।
३. अंग्रेजले इन्डिया छोड्दा, कश्मिर, गोवा ( सन् १९६१ सम्म पुर्तगालिको राज्य थियो ) इंडिया स्वतन्त्र हुदा जम्मु कास्मिर, गोवा र सिक्किम स्वतन्त्र राज्य थिए । अन्तत इंडियाले यी सब हडपेरै छोड्यो ।
भुटान नाम मात्रको स्वतन्त्र राज्य हो, यो पनि उसैको अधिनमा छ । हामि नेपालीले नेपाल कहिले पनी दाश भएनौ भन्छौ त्यो साँचो पनी हो तर नेपालका शासक जहिले पनी इन्डियाको दाश भएर शासन गरेका छन् ।
४. देशमा इन्डियाले अतिक्रमण गर्यो भनेर इमर्जेन्सी घोषणा गर्नुस । इन्डिया आर्मी भर्ना भएका नेपालि सैनिकलाई तुरुन्त बोलाउनुस ।इन्डियाले हडप्पेका गोवा, जम्मु कास्मिर र सिक्किमलाई राष्ट्रको मान्यता दिनुस ।
५. इन्डियाका स्टेटले अलग राज्य गर्न चाहेमा नेपालले तुरुन्त समर्थन गर्नुस र उक्साउनुस । नेपाली सेना प्रयोग गरेर पाकिस्तानलाइ तह लगाएको छ । तिनलाई फिर्ता लिने बित्तिकै पाकिस्तानले इन्डियालाई आक्रमण गर्छ र परास्त गर्न पनि सक्छ ।
६. नेपाली इच्छुक युवाहरुलाइ सैनिक तालिम र रोजगारीमुलक तालिम दिएर, देश निर्माणको काम तुरुन्त थाल्नुस ।
७. दुइ महिनाको बोर्डर शिला गरेर नेपालि बाच्न सक्छ भने इन्डियाको सीमामा पर्खाल लगाउनुस । प्रतेक नेपाली सहयोग गर्नेछन ।
८. संसार भरि छरिएका बिज्ञ नेपालीलाई अनिबार्य नेपालमा बोलाउनुस, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको बिकाश गरेर कृषि र औधौगिकरण बाताबरण बनाउनुस ।
९. राष्ट्रबादी जनताले भष्ट्राचार गर्ने नेता र कर्मचारी, दलाल पुँजीपति ब्यापारी र इन्डियाको लागी काम गर्ने नेता र कर्मचारीको नाम लिस्ट तयार गरी तुरुन्त कारबाही गर्न पहल गर्ने हो भने नेपाल एक सम्बृध्द बिकशित मुलुक केहि बर्षमा नै बन्दछ ।
१०. सम्पन्न र क्षमता भयो भने चीनले जस्तै सुगौलीमा गुमेको भूमी चाडै नै फिर्ता लिन सकिन्छ ।
बुध्दि लगाउ पासा !!!
ग्रेटर नेपाल के हो ?
May 28, 2022 Pundary Aryal
खुट्टा तान्नेको कमि छैन यो दुनियाँमा !!!
Feb 28, 2021 Pundary Aryal
बलात्कार किन भइरहन्छ समाजमा ?
Feb 20, 2021 Pundary Aryal